Ihotele yaseBlossom iHouston Yandisa iSibonelelo esitsha sokuVulelwa kuMaqela
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Ihotele yaseBlossom iHouston Yandisa iSibonelelo esitsha sokuVulelwa kuMaqela
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukongezwa kwamva nje kumboniso wehotele yaseHouston, iBlossom Hotel Houston isungule inani leentengiso zexesha eliqingqiweyo eziyilelwe ukunceda abaququzeleli beminyhadala ukuba benze uninzi lweentlanganiso zabo. Ukusuka ekufumaneni amanqaku aphindwe kathathu okuthembeka kunye nokufumana isaphulelo ukuya kuthi ga kwi-5% kwibhili yemali ukuya kulondolozo lwesisa kwizixhobo ezivakalayo nezibonwayo kunye namaxabiso akhethekileyo kwindawo yokuhlala yabasebenzi, iingcali zeMICE ezijonge ukusingatha umsitho wazo olandelayo eHouston ziya kufumana okuninzi ezinokuthandwa.
Phakathi ngoku kunye ne-31 kaDisemba 2021, iNyuthazo yeHotele eNtsha ibonelela ngoluhlu lweemvume ezikhethekileyo.
Inokubhukishwa phakathi komhla woku-1 kuJanuwari ngo-2022 ukuya kowama-31 kuMatshi ka-2022, inkuthazo ethi Enhance Your Event ivumela abacwangcisi beentlanganiso iinzuzo ezongezelelweyo.
Ihotele yaseBlossom iHouston iqhayisa ngeenyawo ezili-9,000 zesikwere sendawo enemisitho emininzi yeendibano, iinkomfa ezixutyiweyo, imiboniso yorhwebo, iisemina, ukurhoxa kwesigqeba, kunye neendibano zocweyo.
Ibekwe kufutshane ne-NRG Stadium kunye neZiko lezoNyango laseTexas, iBlossom Hotel Houston izidla nge-9,000 yeenyawo zesikwere sendawo yemisitho enemisebenzi emininzi enika imbeko kwiimfuno ezahlukeneyo zeqela ngalinye, kubandakanywa iindibano, iinkomfa ezixubileyo, imiboniso yorhwebo, iisemina, ukurhoxa kwesigqeba kunye neendibano zocweyo. Iholo enkulu yenkomfa, i-Luna Ballroom, iqhayisa ngesakhono se-audiovisual yangoku kwaye iyakwazi ukuhlalisa ukuya kuma-250 abantu, kunye neendawo ezivulekileyo zangaphambili. Ngokuzola kwayo, umxholo wombala ophefumlelwe yinyanga kunye nokuchukumisa okumnandi, igumbi lebhola libonelela ngesetingi esifanelekileyo somtshato kunye nemibhiyozo yentlalo. Ukuqhekeka kunye neentlanganiso ezincinci zinokuqhutywa kumagumbi okuhlangana asithoba angaphezulu kunye nezicwangciso zomgangatho oguquguqukayo kunye nolungelelwaniso lwezihlalo ukulungiselela nasiphi na isitayile somsitho ukusuka kwiseshoni yebhodi yesigqeba kunye nomboniso wendlela yethiyetha ukuya kwisidlo sakusasa sonxibelelwano esingacwangciswanga kunye nentengiso ye-tech-savvy.
Isebenza kwimisitho ubuncinane yeendwendwe ezili-10 ezibhukishweyo zabanjwa phakathi kwangoku kunye ne-31 kaDisemba 2021, UKwandiswa kweHotele eNtsha inikeza uluhlu lweemvume ezikhethekileyo:
I-5% isaphulelo kwi-master bill kuzo zonke iintlawulo ezifanelekileyo
Umgaqo-nkqubo we-flexible attrition
Igumbi elinye elisemgangathweni kumagumbi angama-35 abhukisiweyo
Imali eyongiwe kwindawo yokuhlala yabasebenzi
I-20% yokonga kwizixhobo ezivakalayo nezibonwayo
I-Wi-Fi esemgangathweni ethotyelwayo kwiindawo zokulala kunye namagumbi okuhlangana
Iipasile zokupaka ezili-10.
Inokubhukishwa phakathi komhla woku-1 kuJanuwari 2022 kunye ne-31 kaMatshi 2022, i Phucula uMnyhadala Wakho Unyuso luvumela abacwangcisi beentlanganiso ukuba babambe ugcino lwamagumbi ali-10 ubuncinane ubusuku ngabunye kunye/okanye bachithe ubuncinci be-$1,000 ekulungiseleleni ukukhetha naziphi na izibonelelo ezimbini:
I-3% isaphulelo kwi-master bill kuzo zonke iintlawulo ezifanelekileyo
Ikhefu lekofu elinye eliluncedo (imizuzu engama-60 yenkonzo eqhubekayo)
I-Wi-Fi eyomeleziweyo encomekayo kwindawo yokuhlangana
Amanqaku eSicwangciso seMvuzo yeStash kathathu.
Uncedo lwehotele enemigangatho eli-16 ibandakanya amagumbi eendwendwe angama-267 atofo-tofo kunye neesuti ezineendawo zokuhlala eziphangaleleyo, ukukhanya kwendalo okuninzi kunye nehonjisi esulungekileyo, ehonjisiweyo encinci. Ihotele ikwabonelela nangezinye izinto eziluncedo, kubandakanywa i-state-of-the-art, i-24/7 Fitness Centre efakwe yi-Peloton®; Idama eliphezu kophahla kunye negumbi lokuphumla eliqhayisa ngemibono etshayelayo yedolophu yaseHouston. Ukubhukisha kunye nolwazi oluthe kratya malunga nezibonelelo, nceda undwendwele BlossomHouston.com.
Iqela leBlossom Holding kungekudala liza kuqalisa umbono walo wokuqala wase-US, IBlossom Ihotele iHouston, amava okuvelisa amava ehlabathi amiliselwe nzulu kwi-Space City. Ihotele ibeka iindwendwe nje amanyathelo ukusuka kwiziko lezonyango likhulu kwihlabathi kunye namashishini aphezulu e-Houston kunye neendawo zokuzonwabisa, kwaye njengeyona hotele ikufutshane ne-NRG Stadium, ikwayimizuzu ukusuka kwiindawo ezinomtsalane zaseHouston. Nokuba zihambela iimfuno zonyango, ishishini okanye ulonwabo, iindwendwe zinokonwabela ukwahluka kweHouston, ekwabonakala kwihotela ye-chic yeengcambu kwiingcambu ze-aerospace yesixeko, ngelixa zithatha ithuba lokuthenga ivenkile yehotele, iindawo zokutyela ezimbini ezigxile kumpheki, izibonelelo ezingahambelaniyo. kunye neenkonzo, amagumbi eendwendwe obutofotofo kunye nentaphane yemisitho kunye neendawo zokuhlangana. Ngolwazi oluthe vetshe, nceda undwendwele BlossomHouston.com okanye silandele Facebook kwaye Instagram.